Vakawanda Vanotambira Kisimusi paMuganhu weBeitbridge
Muganhu weZimbabwe neSouth Africa weBeitbridge Border Post
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvotambira Kisimusi pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBeitbridge nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kupfuura nepamuganhu uyu vachipinda munyika.
Vafambi vataura neStudio 7 vanoti nekuda kwekuwanda kwedzimotokari nemabhazi zviri kupinda muZimbabwe, veruzhinji vari kufamba netsoka kwemakiromita ane chitsama kuti vasanodhindisa magwaro avo ekufambisa.
Mumwe wevashanyi ava, Muzvare Catherine Mapomba, vanoshanda kuPretoria vanoti vabatikana zvikuru nekutadza kunotamba Kisimusi nemhuri yavo sezvavange vakatarisira.
Muzvare Mapomba vanoti kupedzawo nguva vari pamuganhu wenyika mbiri idzi kuri kukanganisa homwe dzavo sezvo vvave kushandisa mari dzavanga vasingatarisiri kushandisa.
VaMichael Musavengana vanove mumwe mufambi, vanoti kunyangwe haazvo vaive vadhindisa mapasipoti avo nemusi weSvondo kuma 1 masikati mushure mekufamba kusvika paBeitbridge, kusvika kuma 7pm, bhazi ravo ranga risati rasvika kuti vayambuke kuenda kudivi reZimbabwe.
Mumwezve mufambi akangoda kuzivikanwa nezita rekuti VaMashayamombe vanopomera vashandi vepamiganhu yenyika iyi mhosva yekusaita basa nechimbi-chimbi pamwe nekusawedzerwa kwevashandi vakawanda kunyanya kudivi reSouth Africa.
VaMashayamombe vanoti igaroziva kuti vafambi vanowanda nguva yezororo reKisimusi, vakati zvinhu zvinofanirwa kugadzirirwa.
Vamwewo vanoti huwandu hwevanhu vashandisa muganhu uyu hwawanda kudarika mamwe makore.
Iyi ndoKisimusi yekutanga muZimbabwe vaive mutungamiri wenyika kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere VaRobert Mugabe vasiya basa, izvo zvinonzi nevamwe ndizvo zvaita kuti vanhu vakawanda vaimbotya kudzokera kumusha vafunge kunotambira zororo vari pamwechete nehama neshamwari vavakapedzisira kuona kare kare.